House for Sale in Yankin - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Houses for Sale in Yankin
ရန္ကင္း၊ ေဘာက္ေထာ္၊ 50'x105'၊ RC-3, ဂရန္ေျမ၊ ေနရာေကာင္းေလး ။
ရန္ကင္း၊ ေဘာက္ေထာ္၊&lt;br /&gt; လမ္းေကာင္း၊ ေနရာေကာင္း၊&a...
Ad Number S-10039666
ပါရမီရိပ္​သာ၊ မဥၨဴလမ္​းတြင္​ ၊ 40'x80'၊ RC-2,MB-3,A/C-4,ဘိုးဘြားပိုင္​ ။
ပါရမီရိပ္​သာ၊ မဥၨဴလမ္​းတြင္​ ၊ 40'x80'၊...
09421045692/ 09785555699/ 09420074367/ 09266677877/09403701234
Ad Number S-10036267
Ad Number S-10033328
ပါရမီရိပ္​သာ၊ သဇင္​ျဖဴလမ္​းတြင္​ ၊ 40'x60'၊ RC1½၊ MB-3, A/C, ပါ​ေကးခင္​း၊
ပါရမီရိပ္​သာ၊ သဇင္​ျဖဴလမ္​းတြင္​ 40'x60...
09421045692/ 09785555699/09788855333/ 09266677877/09403701234
Ad Number S-10033088
ပါရမီရိပ်သာဝန်းအတွင်း လုံးချင်းအိမ် ရောင်းမည်.
-2Master, 1 Single, ကျွန်းပါကေးခင်း -4A/c - နေရာကောင်းလမ်းကျယ်လမ်းသန့်...
Ad Number S-10030905
Infinity Real Estate Close
ရန်ကင်း ရွှေသစ္စာလမ်းရှိ အိမ်နှင့်ခြံ ရောင်းမည်။
TYM081 FOR SALE-...
Ad Number S-10030650
☃️☃️ #ရန်ကင်းမြို့နယ် ရှိအချက်ချာကျသော လမ်းမကြီးပေါ်တွင် အဆင်သင့်လူနေနိုင်ပြီး...
Ad Number S-10045204
ဘောက်ထော် ၁၆ ရပ်ကွက်ရှိ4RC တိုက် (၄၀'x၁၁၀') ရောင်းမည်။
Ad Number S-10044591
☃️☃️ #ရန်ကင်းမြို့နယ် လမ်းသန့် နေရာကောင်း 2RC ကိုယ်ပိုင်ခြံဝန်း လုံးချင်ခြံကျယ်...
Ad Number S-10041993
ရန်ကင်း၊ ကျောက်ကုန်းရှိ လုံးချင်း ၂ထပ် ရောင်းမည်။ ဈေးနှုန်း_၇၈၀၀သိန်း
7,800 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10041767
Ngwe Saung Real Estate Close
15,500 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10040390
Shwe Pyi Eain Real Estate service Close
ရန်ကင်းမြို့နယ် ပါရမီရိပ်သာ မဉ္ဇူလမ်းမအနီး2RCလုံးချင်းအိမ် နေရာကောင်းထောင့်ခြံ...
Ad Number S-10038821
ရန်ကင်း ပါရမီရိပ်သာ မဉ္ဇူလမ်းမအနီး နေရာကောင်း ထောင့်ခြံအရောင်း
Ad Number S-10038048
Shwe San Eain Thit Real Estate Co.,Ltd Close
ရန္ကင္း ေဘာက္ေထာ္တြင္ သံုးထပ္လံုးခ်င္းေရာင္းမည္
Ad Number S-10035686